Olivia Rodrigo naJoshua Bassett mutambo wakaongororwa sevateveri vanofungidzira love triangle muDrivers License track kubva kuSour. - Pop-Tsika
Olivia Rodrigo naJoshua Bassett mutambo wakaongororwa sevateveri vanofungidzira love triangle muDrivers License track kubva kuSour.
Dambarefu raOlivia Rodrigo, 'Sour,' rakava pakarepo pakaburitswa muna Chivabvu 21, 2021. Asi zvinoita kunge imwe chete kubva kualbum, 'Drivers License,' iri kukonzera makuhwa pakati pevateveri pamusoro pemutambo wetrona triangle pakati paOlivia, Joshua Bassett, naSabrina Carpenter.
Chitupa Chekutyaira, wekutungamira mumwe kubva kuSour, akatanga kuvhenekera runyerekupe rwakakomberedza vatatu veDisney nyeredzi yekudanana parakaburitswa muna Ndira 8, 2021.
Zvisinei, kudonhedza kwealbum kwakagadzira kufungidzira kutsva. Iyo ine vateveri vanotonga mutambo pamusoro peiyo inonzi 'diss track' naSabrina uye nemhinduro yaJoshua kuna Olivia pane iye ega.
Fani dzakazadza iyo muimbi wechidiki -munyori wezvemagariro midhiya nguva pamwe nemitero kune yakakwenenzverwa album. Asi vazhinji vakabatwawo pamusoro peyavanonzi rudo triangle.
Vaverengi vanogona kutarisa kumwe kwekuita pazasi.
Uyezve verenga: Franco Battiato anofa ave nemakore makumi manomwe nenomwe, vateveri vanopa rukudzo kumuimbi anozivikanwa wemuItaly
Ndingafarire kuona Joshua Bassett achidzoka kubva kune ino pic.twitter.com/fGN68MnzPn
- Ames🪴 (mesAmesLFTV) Chivabvu 21, 2021
iyo cast yeHSMTMTS apo joshua bassett anofamba paseti #SOUROlivia pic.twitter.com/JYRtgsC67b
- lily (@livsleftfoot) Chivabvu 21, 2021
manzwiro ekutyaira rezinesi / akanaka 4 u #SOUROlivia pic.twitter.com/Dg4Qjq9TDl
- yas YOSE ME (@ i4lils) Chivabvu 21, 2021
vamwe vese hsmtmt vakakanda apo olivia rodrigo naJoshua bassett vari kunyora mimhanzi nezve mumwe nemumwe pakati pezviitiko pic.twitter.com/WYuuF2fmGK
- (@smhcharu) Chivabvu 21, 2021
joshua bassett iwe zvirinani tariro ini handimbomhanya mhiri iwe mumigwagwa pic.twitter.com/QiKBoQLc03
- hailey judkins (@hay__jay) Chivabvu 21, 2021
joshua bassett achitumira mameseji kuna john mayer rn achibvunza kuti chii chaanofanirwa kuita mune iyi mamiriro
- mads (@okaymadi) Chivabvu 21, 2021
aya maJoshua bassett tweets akandikwidza mhere ndine hurombo pic.twitter.com/ztmpbstF7V
- shug♀sour kunze IZVOZVI (@followdawrtosee) Chivabvu 21, 2021
kana Joshua Basset aifunga kuti rezinesi rekutyaira raive rakaipa #sour pic.twitter.com/PJqrCGwgPT
- carter (@carterrcook) Chivabvu 21, 2021
Rwiyo rwakanakisisa kubva #SOUROlivia iri kufamba 🤩 pic.twitter.com/IrcEqiJ9tC
- Bvisa :) (@ridsrep) Chivabvu 21, 2021
fungidzira kuti hauna kubiridzira, asi iwe uchiri mutengesi - Olivia Rodrigo
- MIRO (@sseominisce) Chivabvu 21, 2021
ndinofunga isu TOSE takarambana naJoshua bassett #SOUROlivia pic.twitter.com/0cugwTQyVz
- karissa (@karissakorman) Chivabvu 21, 2021
joshua bassett angangoda kupinda muchirongwa chekudzivirira chapupu ndinotya
- brianna (@bribrisimps) Chivabvu 21, 2021
Ini ndachembera zvekuti Olivia rodrigo, Joshua Bassett, mutambo weSabrina asi ini ndakangoteerera Mutengesi neni - #joshuabassett pic.twitter.com/EOnQm57usu
- Naya (@heylellyy) Chivabvu 21, 2021
wakawana sei nzira yekuita kuti Joshua Bassett afambise. Rega Olivia ave mukuru asina kuwedzera iyi dude kune convo pic.twitter.com/z9o3S00CCJ
- Beep Bop Beep Boop | ʙʟᴍ (@___tinotenda_) Chivabvu 21, 2021
Vakavharira peji reWikipedia raJoshua Bassett saka hatikwanise kurigadzirisa kuti titaure kuti akaurayiwa naOlivia Rodrigo muna Chivabvu 21 2021
- maddie graham (taylors vhezheni) (@madelineelisaa) Chivabvu 21, 2021
amai vaJoshua bassett mushure mekunge vaterera kuvava pic.twitter.com/ESOLdLqSDr
- mirrorball (@myheartredheart) Chivabvu 21, 2021
Olivia Rodrigo x Joshua Bassett x Sabrina Carpenter anoda triangle akatsanangura
Kune runyerekupe rwekuti Dhirairi Rezinesi rinotaura kuti maHigh School Music: The Musical - The Series (HSMTMTS) co-nyeredzi Olivia Rodrigo naJosh Bassett vanonzi vaive muhukama vasati vekupedzisira vatanga kufambidzana nemusikana we'Musikana Anosangana Nenyika ', Sabrina Carpenter.
Olivia Rodrigo naJosh Bassett vaive zvakare pa-screen vaviri paHSMTMTS, vachitamba Nini uye Rocky, zvichiteerana. Sabrina Carpenter, zvakare, ari chikamu cheImba yeMouse mhuri sezvaanotamba muMusikana Anosangana Nenyika.
Uyezve verenga: Lil Nas X's Zuva Rinoenda Pasi mimhanzi vhidhiyo ine mafeni emanzwiro sezvavanodaidza 'kusuruvara asi kubata'
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo HSMTMTS co-nyeredzi haina kumbobvumidza pachena kuti vaive pamwechete. Nekudaro, vateveri vanofunga kuti runyerekupe rwakaparadzana pazhizha mushure mevhidhiyo yeTiktok naOlivia Rodrigo ataura nezve 'kutadza hukama.'
sei kupedza shamwari nezvakanaka uye kugara shamwari
Zvinoenderana nedzidziso dzevanyengeri, zvinoreva kumashure kwemashoko kubva kuDriver's License zvinofungwa naOlivia Rodrigo pfungwa dzaJosh Bassett naSabrina Carpenter vachiramba vachidanana:
'Uye iwe pamwe unemusikana mutsvuku / Ndiani aigara achindiita kusahadzika / Iye mukuru kwazvo kwandiri / Ndiye zvese zvandisina chokwadi nazvo.'
Aya mazwi akange aine mafeni aifungidzira kuti aive pamusoro paSabrina Carpenter mushure mekufumura vhezheni yekutanga yenziyo iyo yaive 'brunette musikana.'
Horo yemurume ane makore gumi nemasere yakarova zvakare yakawedzera mhinduro kubva kumukadzi wake wemakore makumi maviri uye waaiti ane makore makumi maviri nemumwe. Vakadonhedza ma singles avo, akanzi 'Lie Lie Lie Lie' uye 'Skin,' zvichiteerana, nguva pfupi mushure meDriver's License kuburitswa.
Ganda raSabrina Carpenter rakavhundutsa vateveri sezvo vazhinji vaitenda kuti yaive mhinduro yemuimbi kuna Olivia Rodrigo's lead single:
'Pamwe taigona kunge takave shamwari / Dai ndakasangana newe muhumwe hupenyu / Pamwe ipapo tinogona kunyepedzera / Hapana hunyoro mumazwi atinonyora / Pamwe iwe wanga usingareve / Zvimwe' blonde 'ndiyo yega rwiyo / Iyo chete mutinhimira. '
Iye nyeredzi akajekesa pa Instagram kuti rwiyo rwake rwaisave diss track, uyezve haana 'kunetswa nemitsetse mishoma mune (yakanaka) rwiyo.'
Nekudaro, zvinoita sekunge dzidziso dzesango dzakatenderedza nyeredzi nhatu hadzife pasi chero nguva munguva pfupi.
Uyezve verenga: KATY PERRY X POKEMON mafambiro semuimbi anounza Pikachu mune nyowani nyowani Magetsi inotumira vateveri mukutambudzika.
ndinorarama hupenyu zvizere
cm punk mari mubhangi
ko wwe superstars anoita marii
kutora mumwe munhu zvisina basa muhukama
uve chinhu chakakosha muhupenyu hwako
zvinhu zvakakosha kuziva muhupenyu